Puntland oo tababartay ciidan la dagaallama burcad badeedda - BBC News Somali
Puntland oo tababartay ciidan la dagaallama burcad badeedda
29 Nofembar 2010
Image caption Burcad badeed Soomaali ah
Magaalada Bosaso waxaa maanta lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagu maamuusayo qalinjebinta kooxdii ugu horraysay ee ka mid ah ciidanka badda ee Puntland taas oo dhamaysay tababar halkaas uga socday. Ciidankan waxaa loogu talagalay la dagaallanka burcadda badaha iyo degaannada berriga ee ku xeeran badaha Puntland.
Ciidanka tababarka dhammaystay oo ay tiradiisu gaarayso 155 askeri wuxuu qayb ka yahay ciidankii ugu horreeyay ee badeed oo uu yeesho maamulka Puntland kaas oo loogu talagalayo inuu dagaal toos ah la galo burcadda badaha ee ka qaraabata badaha Soomaaliya ku xeeran gaar ahaan dhinaca Puntland.
Xafladdii xiritaanka tababarka ciidanka badaha ee maanta oo lagu qabtay xarun cusub oo ciidankaasi leehayay oo ku taalla duleedka magaalada Bosaso waxaa ka qaybgalay masuuliyiin ka tirsan dawladda, hay’adaha caalamiga, dadwaynaha iyo xubno kale oo lagu martiqaaday.
Madaxwayne ku xigeenka Puntland Cabdisamad Cali Shire oo kulankaas ka hadlay ayaa ka warramay ahmiyadda ciidankaasi leeyahay iyo baahida loo qabo waqtigan ciidan badeed ka qaybgala dadaalka loogu jiro ka hortagga burcadda badaha ee ka hawlgala xeebaha Soomaaliya ku aaddan kuwaa soo khalkhal xoog leh geliyay ganacsiga iyo isusu socodka badeecadaha caalamka.
Intii ay socotay maanta xafladda xiritaanka tababarka ciidanka badda ee Puntland waxaa si qoto dheer looga hadlay in marka laga yimaado dhibaatada caalami ee burcadda baduhu ay ku hayaan adduunka in dhibaatooyin kale oo baaxad leh ay ku hayaan dadka Soomaalida ah.
Sicir-barar xoog leh kaas oo sare u qaaday qiimaha badeecadaha daruuriga ah, dhaqan-xumo baahsan, faafidda mukhadaraadka noocyadiisa kala duwan, fal-dembiyeedka dilku ugu horreeyo iyo arrimo kale oo Soomaaliya ka taagan ayaa la tilmaamay in burcadda baduhu ay horsed ka yihiin.
Image caption Xeebaha Soomaaliya ayaa waxa ku sugan ciidamo ajnabi ah oo la dagaallama burcad badeedda
Masuuliyiinta ciidanka tababarka dhammaystay oo iyana ka hadlay munaasabadaas ayaa sheegay in ciidanku qaatay tababar ku filan oo ay ku gudan karaan hawsha adag ee sugaysa waxana lagu wadaa in ciidanka badaha ee Puntland uu si dhaqso ah uga hawlgalo meelihii loogu talagalay.
Sida ay sheegayaan saraakiisha dawladdu waxaa qorshuhu yahay in tirada guud ee cidanka badaha Puntland la gaarsiyo 1050 askeri oo ka hawlgeli doona gudaha badaha iyo degmooyinka xeebaha oo ay ka mid tahay magaalada Eyl oo horay u ahaan jirtay saldhig muhim u ah burcadda badaha ee ka hawlgasha xeebaha ku aaddan Puntland.
Waqtigan xaadirka ah marka la eego degaannada Puntland waxaa muuqata in laga nafisay maraakiibta la afduubo ka dibna la geeyo xeebaha Puntland taas oo ka dambaysay olole xoog leh oo maamulku ku qaaday burcadda badaha.
Taas waxay hoos u dhigtay dhaqdhaqaaqii burcadda badaha ee ka hawlgeli jirtay xeebaha Puntland ka dib markii xabsiga la dhigay in ka badan 300 oo burcadda ka tirsan kuwaas ku xukuman sannado badan waxana saraakiisha xabsiyadu ay xaqiijiyeen in kala bar maxaabiista lagu hayo xabsiyada Puntland ay ka soo jeedaan burcadda badaha.
Haddii mashruucani noqdo mid taabbagala waxaa rajo wanaagsan laga qabi karaa in la xakameeyo burcadda badaha ee jahwareerka iyo khal-khalka ku ridday Soomaalida iyo caalamlka inkasta oo markaa laga yaabo in baahi loo qabi karo sidii loo jihayn lahaa dhallinyarada faraha badan ee ku sugan degmooyinka xeebaha kuwaas oo la hiyi-kacay dhaqaalaha faraha badan ee laga helo afduubka maraakiibta.